Kwaye Kutheni Kubalulekile
Isabelo sithetha nje ukuxelela abafundi bakho apho ulwazi oluvela kwibali lakho livela khona, kunye nabani catshulwayo. Ngokuqhelekileyo, isalathiso sithetha ukusebenzisa igama elipheleleyo lomthombo kunye nomxholo wecandelo ukuba oko kuyafaneleka. Ulwazi oluvela kwimithombo lunokuthi lichazwe okanye lucatshulwe ngokuthe ngqo, kodwa kuzo zombini iimeko, kufuneka zithathwe.
Gcina ukhumbule ukuba kwi--re-re-attribute-isichaza igama elipheleleyo lomthombo kunye nomsebenzi wecandelo lomsebenzi linikezelwa-kufuneka lisetyenziswe xa kunokwenzeka.
Ukwaziswa kwe-on-record-in-credible is more reliable than any other type of attribution ngenxa yesizathu esilula ukuba umthombo ufake igama labo kumgca ngolwazi abalunikezile.
Kodwa kukho ezinye iimeko apho umthombo ongeke uzimisele ukunikela ngokugcwele kwi-record record. Masithi ungumlobi wezophando okhangele kwiimangalo zorhwaphilizo kurhulumente wesixeko. Unomthombo kwiofisi yodolophu ozimisele ukunika ulwazi, kodwa ukhathazekile ngeziphumo xa igama lakhe libonakala. Ngaloo ndlela, wena njengomnyatheli uya kuthetha ngalo mthombo malunga naluphi uhlobo lwesigqibo awazimisele ukukwenza kuso. Uyakwehlisela ngokupheleleyo kwisigxina sokubhaliweyo kuba ibali lifanelekile ukufumana uluntu olungileyo.
Nantsi imimiselo yeentlobo ezahlukeneyo zokunikezelwa.
Umthombo - Isiqendu
UJeb Jones, ohlala kwipaki ye-trailer, wathi isandi senkwenkwezi sasisongela.
"Kwakubonwe njengesitimela esikhulu senqanawa esiza kuyo. Andizange ndive into efana nayo, "kusho uJeb Jones, ohlala epaki yetrailer.
Abathathi bamapolisa basebenzisa ii-paraphrases kunye nezicaphuno ezichanekileyo ezivela kumthombo. Iingcaphuno ezichanekileyo zibonelela ngokukhawuleza kunye nokuxhumeke ngakumbi, isalathisi somntu kwibali.
Bajwayele ukudweba umfundi.
Umthombo - Isiqendu kunye neCote
"Kwakubonwe njengesitimela esikhulu senqanawa esiza kuyo. Andizange ndive nantoni na, "kutsho uJones.
(Qaphela ukuba kwisitayela soNxibelelwano oluHlangeneyo, igama elipheleleyo lomthombo lisetyenziselwa okokuqala, ngoko ke igama elidlulileyo kuzo zonke izikhokelo ezilandelayo. Ukuba umthombo wakho unesihloko esithile okanye isigaba, sebenzisa isihloko phambi kwegama lakhe elipheleleyo kwisiqalo sokuqala , ngoko nje igama lokugqibela emva koko.)
Naliphi na ixesha ulwazi oluvela kwimbali yakho luvela kwimvelaphi kwaye aluveli kwimiboniselo yakho okanye ulwazi, kufuneka kuthathelwe. Umthetho omhle wesityhubo ukubonisa ukuba kanye ngomhlathi xa ubalisela ibali ngokubanzi ngamagqabaza avela kwi-intanethi okanye ngababonela ngamehlo kumcimbi. Ingabonakala iphindaphinda, kodwa kubalulekile ukuba intatheli zicaciswe malunga nokuba ulwazi lwabo luvela phi.
Umzekelo: Umsolwa ubalekile kwipolisa yamapolisa kwiBroad Street, kwaye amagosa amthabatha ngebhokisi ngaphandle kwe-Market Street, utsho uLim Jim Calvin.
Iintlobo ezahlukeneyo zoBonelelo
Encwadini yakhe ethi "Iindaba Zeengxelo Nokubhala," uprofesa wenzululwazi uMelvin Mencher uchaza iintlobo ezine ezihlukeneyo zobume:
1. Kwirekhodi: Zonke izitatimenti zichithwe ngokuthe ngqo kwaye zibandakanyeka, ngegama kunye nesihloko, kumntu owenza ingxelo. Olu luhlobo olubaluleke kakhulu lwesabelo.
Umzekelo: "I-US ayinaso isicwangciso sokuhlasela i-Iran," kusho uNobhala we-White House unobhala uJim Smith.
2. Ngemvelaphi: Zonke izitatimenti zichithwe ngokuthe ngqo kodwa zingenakubizwa ngokuba yigama okanye isihloko esithile kumntu ophawulayo.
Umzekelo: "I-US ayinaso isicwangciso sokuhlasela i-Iran," kusho umkhulumeli we-White House.
3. Ngasemgangathweni ophezulu: Nantoni na into ekuthethwa ngayo kwi-intanethi iyasetyenziswa kodwa kungekho kwisicatshulwa esicacileyo kwaye kungekhona isabelo. Intatheli ibhala ngamazwi akhe.
Umzekelo: Ukuhlasela i-Iran ayikho kwikhadi le-US
4. Ukukhuphela kwiRekhodi: Ulwazi lusetyenziso lwentatheli kuphela kwaye aluyi kupapashwa. Ingcaciso nayo ayinakuyithathwa kwenye imithombo inethemba lokufumana ubungqina.
Mhlawumbi akudingeki ukuba ungene kuzo zonke iindidi zeMencher xa uxoxisana nomthombo. Kodwa kufuneka ucacise ngokucacileyo indlela ulwazi olunikezwa ngayo umthombo wakho onokuthi unganwe.
Nazi iindlela zokufumana iingcamango zeendaba zoshishino kwilizwe lakho
Izilwanyana ezinegazi elibomvu okanye eliphuzi
Iimpawu zeNgcali-Mntu - iMarve Comics